ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်အသံမည်သို့သွင်းရမည်နည်း ငါက Mac ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်အသံမည်သို့သွင်းရမည်နည်း
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်အသံများကိုအသံသွင်းရန်ရွေးချယ်စရာများနှင့် application များစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူအတွက်အပြုသဘောဆောင်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။ တတိယပါတီမိုက်ခရိုဖုန်းသုံးရန်ရွေးစရာများသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်ကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကမှတ်မိသေးသည် USB မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအသံကဒ်များ ဤအသံဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်အသံများကိုအသံသွင်းရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအဖြေတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် podcast၊ ဗီဒီယိုချန်နယ်သို့မဟုတ်အသံအရည်အသွေးကောင်းရန်လိုအပ်သည့်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်၎င်းကိုပညာရှင်ပီသမှု (သို့) တဝက်ပညာရှင်ဆန်ဆန်မြှုပ်နှံပါကငွေအနည်းငယ်မြှုပ်နှံခြင်း၊လွင်ပြင် Mac နှင့်အတူ»ကျွန်ုပ်တို့သည်အသံသွင်းချက်များကိုကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ Mac တွင်အသံသွင်းရန်လိုအပ်သောအရာမှာယနေ့ရရှိရန်အလွန်လွယ်ကူသောအရာနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆော့ဝဲ (ယခုမြင်တွေ့ရမည့်လက်ရှိ Macs များ၌ပင်ပေါင်းစပ်ထားသည်) နှင့် hardware တစ်ခုဖြစ်သည်။ Mac တစ်ခုချင်းစီနှင့် Mac တစ်ခုလုံးရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ဒီ post မှာအဓိကတွေ့ရတာကတော့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြောမယ် Quicktime Player အက်ပလီကေးရှင်း ၎င်းသည် OSX ၏လက်ရှိ Macs အားလုံးတွင်တပ်ဆင်ထားသည့် default multimedia player ဖြစ်သည်။
1 Mac ပေါ်မှာအသံဘယ်လိုအသံသွင်းမလဲ
စတင်ရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုရှုပ်ထွေးရန်မလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့တွင် Mac ရှိရန်လုံလောက်သည်။ အသံဖမ်းယူရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အသံကိုအသံသွင်းပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သိမ်းဆည်းထားသော MPEG-4 အသံဖိုင်ကိုသာပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။ ငါတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပြောင်းချင်တယ်.
စတင်မှတ်တမ်းတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် QuickTime Player application ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Launchpad မှ Finder> Applications မှသို့မဟုတ် Spotlight မှဖွင့်ရုံသာလိုအပ်သည်။ ပြီးတာနဲ့ငါတို့လိမ့်မည်ဖွင့်လှစ် File> New Audio Recording ကိုနှိပ်ပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်အသံကိုတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ပြီးဖိုင်တွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်နေရာတွင်သာသိမ်းဆည်းရမည်။
ပထမ ဦး စွာပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အသံလွှင့်ခဲ့တဲ့ Mac မှာအသံကိုအရင်ဖော်ပြခဲ့သလိုမျိုးပြင်ပကိရိယာတွေမလိုအပ်ဘူး။ သိသာထင်ရှားတဲ့အသံတွေကိုအသံသွင်းဖို့အခြားနည်းလမ်းတွေကိုသုံးနိုင်တယ်၊ ငါတို့ Mac အတွက်တူညီတဲ့ application ကိုသုံးပေမယ့်၊ လက်ရှိ iPhone (EarPods) တွင်ထည့်သွင်းထားသောနားကြပ်နှင့်မိုက်ကရိုဖုန်း သို့မဟုတ်ပင်မည်သည့်လက်ရှိစမတ်ဖုန်းပေါ်မှာ။ ဤကိစ္စတွင် Operation သည်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းနားကြပ်ကို ၃.၅ မီလီမီတာအပေါက်နှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်။
Mac ပေါ်မှာအသံတွေကိုအသံသွင်းဖို့အတွက်သီးသန့်မိုက်ကရိုဖုန်းကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်၊ Micro Micro လိုတယ် 4-pin jack connector တစ်ခုရှိတယ် (TRRS connector ပေါ်ရှိသုံးစင်း) သည် 3-pin jack (TRS connector ရှိအစင်းနှစ်ခု) နှင့်အတူရှိပါက၎င်းတွင် mic output မရှိပါကထို့ကြောင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအများဆုံးမိုက်ခရိုဖုန်းများ (သို့) လက်ကိုင်ဖုန်းများ၏မိုက်ခရိုဖုန်းများပါ ၀ င်သောနားကြပ်များပြင်ပတွင်အများအားဖြင့် XLR နှင့် အကယ်လို့သင့်မှာရောနှောဘုတ်မရှိရင် ၃.၅mm jack adapter လိုအပ်တယ် Mac နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်။
အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ် Semi ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းဖြင့်မှတ်တမ်းတင်လိုပါက Mac နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်ရောနှောစားပွဲတစ်ခုသို့သွားရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ ယနေ့စျေးကွက်တွင်အမျိုးအစားများစွာရှိပြီးအကောင်းဆုံးအရာကသင်မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည် USB ကို Mac နဲ့ပြီးတော့စားပွဲပေါ်မှာ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော XLR connector နှင့်အတူ mic ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသံသွင်းရန်သွားသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလွယ်ကူစွာသက်သာစေသည်။
အချိန်မှန်အသံသွင်းရန်သိသာထင်ရှားသည်မှာ၊ မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် Mac ၏မိုက်ခရိုဖုန်းဖြင့်နားကြပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်ကိုယ်တိုင်ထိုအရာကိုရည်စူးလိုပါကသင့်အားကောင်းမွန်သောရောနှောစားပွဲနှင့်ကောင်းမွန်သောမိုက်ခရိုဖုန်းကိုသင့်အားအကြံပေးသည်။ ရောနှောကိုယ်တိုင်မှဤလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအပြင်၎င်းမှအမြတ်ကိုတိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဤကိစ္စများတွင် ရောနှောထုတ်လုပ်သူ software ကို အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအသံများကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်ယနေ့ခေတ်အသုံးပြုသူများအတွက်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသောမော်ဒယ်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အသံအမျိုးအစားကိုမဆို Mac တွင်အသံဖမ်းယူသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုမပြောနိုင်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ Actualidad iPad မှ podcasts တွင်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေသည် (ကျွန်ုပ်သည်ဤနေရာမှသင်နားထောင်ရန်အကြံပြုပါသည်)၊ EarPods ပါ ၀ င်တာ၊ သူတို့ကလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အရည်အသွေးထက်ပိုပြီးပေးတာမှန်ပေမယ့်ကျန်တဲ့စျေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ပိုပြီးဆက်ကပ်အပ်နှံထားတဲ့မိုက်ကရိုဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ ငါ Mac မှဖြစ်ကြောင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုမကြာသေးမီကရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အကန့်အသတ်ရှိအင်္ဂါရပ်များရှိသောမိုက်ခရိုဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ငါအိမ်၌ရှိခဲ့သော iCemat Siberia ၏အသံကဒ်ကြောင့်အသံအရည်အသွေးကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်အသံမည်သို့သွင်းရမည်နည်း
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မိုက်ကရိုဖုန်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏နားကြပ်များသည်အဘယ်ကြောင့်အလုပ်မလုပ်ကြောင်းယခုငါသိပြီ။ နောက်တစ်ခုက Media M သို့သွားမလားငါတစ်ခုခုရှာတွေ့လားကြည့်ရအောင်။
Anatolio vazquez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် MacBoock MacBook5,1 ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်အသံသွင်းထားသောစတူဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသံမည်သို့တင်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောသောကြောင့်ကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ ၎င်းတွင်မီးပန်းဆိပ်ကမ်းများမရှိပါသို့မဟုတ်ဘာလဲဆိုတာကျွန်ုပ်မသိပါ။ မိုက်ခရိုဖုန်းထည့်သွင်းမှုကြောင့်၎င်းသည် USB အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ဤ macboock သည်အသံသွင်းစတူဒီယိုအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိပါ
anatolio vazquez အားပြန်ပြောပါ
Francesc Boqueras ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ပါရဂူဘွဲ့စာတမ်းကိုကျွန်ုပ်ရေးသည်။ ငါအများကြီးရေးသားဖို့လိုအပ်ပေမယ့်ငါအနည်းငယ်ညံ့ဖျင်းသောနှေးနှေးပေါ့။ ကျွန်ုပ်၏ MacBook Air အတွက်ကျွန်ုပ်၏အသံကိုအသိအမှတ်ပြုပြီး၊ ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသော Word ဖိုင်သို့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရေးထားသည့်အရာများကိုရေးသားနိုင်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုရှိပါသလား။
Francesc Boqueras အားပြန်ကြားပါ
ယခုအချိန်တွင် Wotd တွင်အသံဖြင့်အသံသွင်းရန်ပရိုဂရမ်ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။ ကျနော်တို့ရှာဖွေနေစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ဟယ်လို၊ ငါ garage တီးဝိုင်းတွင်ပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသံသွင်းထားသည့်အခြားတူရိယာများ၏အခြေအမြစ်အချို့တွင်အသံဖမ်းချင်သည်။ ငါ၌အမြန်လမ်းကြောင်းလိုလားသူနှင့် micro akg အမြင် ၂၂၀ ရှိသည်။ ငါကားဂိုဒေါင်ထဲမှအသံကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ကြိုးစားသောအခါပရိုဂရမ်ကမိုက်ခရိုဖုန်းကိုအသိအမှတ်ပြုသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုမစောင့်ပါ။ ကျိုးပဲ့နေလားဆိုတာကြည့်ဖို့စသည်တို့ ... ဒါပေမယ့်ဒါကဘာမှမရှိဘူး၊ ငါ့အတွက်ပြmeနာကိုတစ်ယောက်ယောက်ကဖြေရှင်းပေးနိုင်မလား။
Maudio ၏ Phantom (48v) ကို activate လုပ်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ၊ ၎င်းမော်ဒယ်သည်စွမ်းအင်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ input ကိုရုပ်သံလိုင်းဟာ maudio ၏ပြင်ပ interface ကိုကြောင်းကိုစစ်ဆေးပါ။ ဒီဟာကို gband audio preferences ထဲမှာလုပ်ထားတယ်။
ငါ interface ကိုစမ်းသပ်ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ငါက Mac ရဲ့အဓိကအသံကထောက်ခံကြောင်းငါသိ၏ဒါကြောင့်ပြproblemsနာများမရှိဘဲအပိုဆောင်းဒရိုင်ဘာထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲအလုပ်လုပ်သင့်တယ်
ed blood ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာထပ်တူပြproblemနာရှိခဲ့ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိုက်ခရိုဖုန်းတွေ (သို့) ရောနှောပေါင်းစပ်စက်တွေနဲ့တောင်ဆက်သွယ်ဖို့ဆိုရင်၊ imic လို့ခေါ်တဲ့ usb audio card ကို Griffin ကနေ ၀ ယ်လိုက်တယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် mac pro ကိုဝယ်ပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားသော program ကိုတွေ့ပြီလား၊ ၎င်းသည်စာလုံးပေါင်း (သို့) ရုံးဖွင့်ထားတာဟုတ်မဟုတ်သိချင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တက္ကသိုလ်တက်ပြီးကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အကျိုးရှိပါလိမ့်မည်။
ငါသည်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာ Imic ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးပြီ။ ၎င်းသည်သေးငယ်သည့် gadget တစ်ခုဖြစ်သည်။ Mac သည်၎င်းကိုချက်ချင်းအသိအမှတ်ပြုပြီးမည်သည့်မိုက်ကရိုဖုန်းကိုမဆိုဆက်သွယ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ယာဉ်မောင်းများမလိုအပ်ပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲအနေနဲ့ငါ mp3 files တွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ RecordPad ကိုသုံးတယ်၊ အဲဒါကငါ့အတွက်အရမ်းကောင်းတယ်။ ကျွန်ုပ်နားကြပ်အချို့ကို Labtec မိုက်ခရိုဖုန်းဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးနီးပါးကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဆွဲယူသည်။
ငါ့မှာ Mac OSX ရှိတာ ၆ လရှိပြီ။ ငါဖန်တီးထားတဲ့ငါအရင်သီချင်းများ (ဘေ့စ်၊ ဒေသန္တရသီချင်း၊ ကွင်းဆက်များ) မှာအသံထွက်အသံသွင်းချင်တယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်မိုက်ခရိုဖုန်း (မည်သည့်နည်း) နှင့်၎င်းကိုအခြားအပုဒ်များပေါ်တွင်ထည့်ပြီးသို့မဟုတ်၎င်းတွင် mp6 (သို့မဟုတ်မည်သည့်ပိုကောင်းသည်ဖြစ်စေ) တွင်ထည့်ပြီးပြီဆိုပါက၎င်းကိုနောက်ထပ် ထပ်မံ၍ တိုက်ရိုက်ထည့်မည်ဆိုပါကအသံကိုမှတ်တမ်းတင်ရမည်။ လမ်းကြောင်း။
1000 ကြိုတင် thanks ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သငျသညျသှားမညျဆိုပါကအကောင်းဆုံးအရာမှာအရောအနှောစားပွဲငယ်တစ်ခုနှင့်မိုက်ခရိုဖုန်းကောင်းတစ်ခုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဇယားကွက်ကို Mac ၏လိုင်းဖြင့်တဆင့်သွင်းနိုင်သည်။
Edgar garcia ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်တွင်ရောနှောထားသောအသံရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်မှာ dj dj interface တစ်ခုရှိသည်။ မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေကြားမည့်အစား၊ Mac ပေါ်တွင်အသံမည်သို့မှတ်တမ်းတင်ရမည်ကိုမသိပါ
Edgar Garcia သို့စာပြန်ပါ
Audio 8 DJ interface ကိုကျွန်တော်မသိဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာကြည့်ရတာသူတို့ပြောတာကို http://www.native-instruments.com/forum/showthread.php?t=72794
ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် system preferences> sound> input သို့သွားပြီးကျွန်ုပ်တွင် internal microphones option သာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် audio line input option မရှိပါ။
ငါကျားသစ် os နှင့်အတူ macbookpro 13 have ရှိသည်
လှိုင်း !! ငါမှာကျားသစ် os ပါတဲ့ 13″ macbook pro ရှိပြီးမိုက်ကရိုဖုန်းမှတဆင့်ရေးရန်နည်းလမ်းရှာချင်သည်။ ငါအများကြီးရေးဖို့ရှိသည်နှင့်ကွန်ပျူတာငါပြောသမျှအရာအားလုံးကိုရေးသားလျှင်, အထောကျအကူလိမ့်မယ်။ ငါ့ကိုရက်ပေါင်းများစွာကယ်တင်လိမ့်မယ် ငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ့်သူကိုငါအရမ်းကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်
၎င်းသည် cakewalk မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်နိုင်သည်။ မူအရဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းကိုသင်စမ်းကြည့်။ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်၎င်းကိုသင်၏inရိယာရှိပန်းသီးပြန်လည်ရောင်းချသူဆီသို့ပို့ဆောင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ mac ရဲ့အသံအရည်အသွေးကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တွင်လက်ရှိတွင် pentium4ရှိပြီးမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် roland cakewalk အသံကဒ်ပြားပါရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏အသံအရည်အသွေးသည်အလွန်တိုးတက်ကောင်းမွန်ကြောင်းကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အသံကဒ်ကို IMAC နှင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။ သဟဇာတလား
သင်၏အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏ mac သည်ပြင်ပမိုက်ခရိုဖုန်းကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လအတန်ကြာကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိလူအများအားကူညီပေးခဲ့သည့်အတွက်၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်အလုပ်မလုပ်ရကြောင်းယခုကျွန်ုပ်သိရှိပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ macbook သည်ကျွန်ုပ်၏နားကြပ်များ၏မိုက်ခရိုဖုန်းကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ iPhone ဖြင့်စစ်ဆေးပြီးဖြစ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်လုပ်သည်ဆိုလျှင် ဦး စားပေးမှုကိုမြင်ရပါမည်။
စကားမစပ်စာလုံးကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်သတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်စကားမစပ် ... ငါမှာ Macspeech Dictate ရှိတယ်။ ဒါကနည်းနည်းစျေးကြီးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါထိုက်တန်တယ်၊ ငါရေးဖို့လည်းအများကြီးရှိတယ် ...
ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုတာငါတူညီတဲ့အရာမှမူးနေပြီ။ ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်လုပ်ဖို့ USB နားကြပ်ကိုရုတ်တရက် Mac Pro လက်နဲ့ဖတ်လိုက်တော့နားကြပ်ရှေ့နားကအသံက OUT နားကြပ်လေးခုမိုက်ကရိုဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ခွင့်ပြုသည်၊ ဥပမာ၊ အိုင်ဖုန်းနှင့်အတူပါလာသည်။ ဒီနည်းနဲ့သင့်မှာမိုက်ခရိုရှိပြီးပိုစျေးသက်သာလိမ့်မယ်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
ငါအလျင်အမြန်အကူအညီလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် macbook, allien & heat mixer နှင့် AKG မိုက်ခရိုဖုန်းတစ်လုံးရှိပြီး usb မှတဆင့်အသံသွင်းလိုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးဖွင့်ထားသောအသံကိုကျွန်ုပ်ကြားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ဒုတိယချန်နယ်နှင့် usb ချိတ်ဆက်ပါ။ ပထမဆုံးလမ်းကြောင်းကရပ်လိုက်ပြီးကြားတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ။ တစ်သက်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
software အရ။ Logic လိုလားသူနှင့်ဂိုဒေါင်တီးဝိုင်းတို့သည်သင်ထိုသို့ပြုခွင့်ပြုသည် Logic သည် Mac အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်၏ကဒ်နှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
အရေးပေါ်အကူအညီ !!! စပီကာသို့မဟုတ်နားကြပ်များအတွက်အသံထုတ်လွှင့်ရုံထက်မကသောကျွန်ုပ်၏ mini mac တွင်မိန့်ခွန်းကိုကျွန်ုပ်မှတ်တမ်းတင်နေပါသည်။ usb adapter ဖြင့် ပြုလုပ်၍ ကျွန်ုပ်၏မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်နားကြပ်များကိုပင်ဆက်သွယ်နိူင်သော်လည်းအရည်အသွေးမှာမဆိုးပါ။ ငါဖျက်ပစ်ချင်ပါတယ်ကြမ်းပြင်ဆူညံသံကျေးဇူးပြုပြီးသင်အကြံပြုချင်ပါတယ်။ အရေးတကြီးလိုအပ်တယ်။ ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မည်သည့်ပြင်ပသတ္တုအစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုမိုက်ကရိုသို့မဟုတ် adapter အားမြေပြင်သို့ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်စစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ဆူညံသံကိုမဖယ်ရှားနိုင်ပါကသင်ပိုမိုလိုချင်သောအရာအတွက်စက်ကိုပြောင်းရမည်။
သူငယ်ချင်း၊ မြေပြင်ဆက်သွယ်မှုလုပ်ရန်သင်မည်သို့အကြံပြုသနည်း။ ကေဘယ်ကြိုးလားဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုလား။ ကူညီပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ငါအပြင်ဘက်မိုက်ကရိုဖုန်းနှင့်လျှပ်စစ်ဂစ်တာနှင့်အတူကားဂိုဒေါင်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ဖို့လိုအပ်ပေမယ့် macbook pro ကိုသာအသံ output ကိုရှိပါတယ်။ ၎င်းသည် output / input ဖြစ်ပြီးသင် preferences panel တွင်၎င်းကိုသင်လုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးပါပြီ။ သို့သော်မည်သည့်နေရာတွင်ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ မက္ကစီကိုအသံရဖို့ခင်ဗျားက USB input ပါတဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုမက္ကဆီကိုမှာ၊ ပီဆို ၈၀၀ ကနေမက်ဆီကိုစီးတီးအလယ်မှာရှိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အွန်လိုင်းမှာသင်ဝယ်နိုင်တယ်။ အောက်ပါလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာပါ။ 800-preferences 1 audio2သည်မိုက်ခရိုဖုန်းချိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်ပါက USB input ကိုရွေးချယ်ပါ။ garageband ဖြင့်သူတို့ရိုက်သည့်အခါတိုင်းသင်လည်းထပ်တူလုပ်ရပေမည်။ သို့သော်ဤတစ်ကြိမ်တွင် Garageband ၏ 'preferences' ကိုသွားလျှင်၊ သင်အတွက် tab တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ ဒုတိယအိုင်ကွန်က audio / MIDI ပြောပြီး USB input ကိုရွေးချယ်သည်။ USB မိုက်ကရိုဖုန်းတွင်အားသွင်းထားသည့်သေးငယ်သောအင်တာဖေ့စ်တစ်ခုရှိသည်။ သင်၌ပါသောအသံသည် built-in မိုက်ခရိုဖုန်းထက် ပို၍ ကောင်းမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်သောအသံပြခန်းကဲ့သို့မဖြစ်နိူင်ပါ။ အကယ်လို့ပိုကောင်းတဲ့အသံကိုသင်လိုချင်ရင်၊ USB output နဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းပါတဲ့မျက်နှာပြင်တခုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရလိမ့်မယ်။ USB မိုက်ခရိုဖုန်းကို ၀ ယ်ဖို့မရှုပ်ထွေးပါဘူး၊ အမှတ်တံဆိပ်အမြောက်အမြားရှိတယ်၊ ပေါင်းစည်းထားတဲ့အသံ၊
Juan Almer အားစာပြန်ပါ
ငါ့မှာ mac pro 13 ရှိတယ်။ usb output ရှိတဲ့ console ကနေ audio ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးသီချင်းတွေကိုအသံသွင်းဖို့စီစဉ်တယ်။ console မှာမိုက်ကရိုဖုန်းကောင်းကောင်းတစ်ခုတပ်ဆင်မယ်။ ငါသည်သင်တို့၏အကူအညီတောင်းပန် ......
အိန်ဂျယ်ဖာနန်ဒက်ဇ Martinez ဟုသူကပြောသည်
ငါ Vaughan နည်းလမ်း၏အင်္ဂလိပ်သင်တန်းကိုယူကြပြီ အခုထိကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရသည့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများတွင်ကျွန်ုပ်၏အသံကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒီအတွက် Adobe Flash ကိုသက်ဝင်စေဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အကြိမ်များစွာတပ်ဆင်ခဲ့သော်လည်းရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်ကိုမထောက်ပံ့နိုင်ပါ။ သင်တန်းအတွင်းအသံကိုအသံသွင်းရန်အခြားအပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုရန်အခြားနည်းလမ်းရှိပါသလား။
အချို့သောကုန်ပစ္စည်းအမည်များကိုဥရောပနှင့်တရုတ်နိုင်ငံများရှိ Apple မှမှတ်ပုံတင်ထားသည်